Gianluca Vialli oo kasoo hor jeestay in Alvaro Morata uu dib ugu soo laabto kooxda Juventus – Gool FM
Barcelona oo isaga xaadirisay wareega siddeeda ee Champions League kaddib markii ay garaacday Napoli… +SAWIRRO
Bayern München oo markale dubatay kooxda Chelsea isla markaana iska xaadirisay wareega siddeeda ee Champions League… +SAWIRRO
RASMI: Kooxda Juventus oo shaacisay in Andrea Pirlo ay ka dhigtay badelka Maurizio Sarri
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee kooxaha Bayern München iyo Chelsea oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee kooxaha Barcelona iyo Napoli oo la shaaciyay
Sergio Ramos oo fariin u diray taageerayaasha Real Madrid kaddib markii laga reebay tartanka Champions League
RASMI: Kooxda Juventus oo shaqada ka cayrisay Macallin Maurizio Sarri kaddib markii xalay laga soo reebay Champions League
Aubameyang oo ku guuleystay xiddiga xilli ciyaareedka ugu fiicanaa Kooxda Arsenal… (Yuu ku garaacay abaal-marintan?)
Maxaa ka soo kordhay doonistii Kooxda Manchester United ee Weeraryahanka Borussia Dortmund, Jadon Sancho?
Muxuu Eden Hazard ka yiri in Kooxdiisa Real Madrid laga soo reebay tartanka Champions League xilli Canowga uu baraf ugu duubnaa?
Gianluca Vialli oo kasoo hor jeestay in Alvaro Morata uu dib ugu soo laabto kooxda Juventus
(Juventus) 20 Maajo 2018. Waxaa si xoogan ay saaxaafada u hadal heesay maalmihii lasoo dhaafay suurtagalnimada uu Alvaro Morata dib ugu laaban karo kooxda Juventus suuqa xagaaga ee soo aadan.
Iyadoo ay arintan taagan tahay ayuu weeraryahankii hore ee kooxda Juventus Gianluca Vialli u sheegay wargeyska Sky Sport: “si gaar ah uma xiiseenayo in Alvaro Morata uu markale dib ugu soo laabto kooxda Juventus”.
“Taasi ugama hadlayo sababa la xiriira tayadiisa, laakiin Juventus waa in ay raadisaa qorsho taa ka duwan, xaalada ma ahan mid sahlan, gaar ahaan xili haatan ay kooxda heysato xidigaha Paulo Dybala iyo Gonzalo Higuaín”.
Si kastaba Alvaro Morata ayaa soo xirtay maaliyada koooxda Juventus mudo dhan laba xili ciyaareed laga bilaawo 2014 ilaa iyo 2016, ka hor inta uusan ku laaban Real Madrid, isla markaana xagaagii hore Chelsea.
Paris Saint – Germain oo saxaafada u soo bandhigtay macalinkeeda cusub ee Thomas Tuchel
Kabtanka Liverpool Henderson oo Daaha ka rogay Qiso Xanuun badan ka hor Final ka Champions League